Nickel Wire Mesh, Yakawedzerwa Metal Wire Mesh, Welded Wire Mesh - Ansheng
Kwakakurudzira haisi simbi kana chiwanikwa; inzira inoshandiswa kuputira zingi inodzivirira simbi kudzivirira ngura. Mune waya mesh indasitiri, zvisinei, inowanzo kurapwa seyakaganhurirwa chikamu nekuda kwekupararira kwayo kushandiswa mumhando dzese dzekushandisa. Iyo zvakare inogona kuitwa yesimbi waya ipapo zinc kupfeka kwakakurudzira. Kazhinji kutaura, iyi sarudzo inodhura, inopa yakakwira mwero kusagadzikana.it iri ...
Plain simbi, inozivikanwawo secarbon simbi, isimbi yakashandiswa zvakanyanya muwaya mesh indasitiri. Iyo inonyanya kugadzirwa nesimbi uye shoma kabhoni. Kuzivikanwa kwechigadzirwa kunokonzerwa nemutengo wayo wakaderera uye kushandiswa kwakawanda. Plain waya pajira riya. Plain simbi waya pajira riya iri stro ...
Iyo yakawedzerwa simbi mesh chinhu chesimbi simbi inoumbwa neyakawedzera simbi mesh kubaya uye yekucheka muchina kugadzira mesh. Chinyorwa: Aluminium ndiro, yakaderera kabhoni simbi ndiro, isina simbi ndiro, nickel ndiro, mhangura ndiro, aluminium magnesium alloy ndiro, nezvimwewo Kuruka uye hunhu: Inoitwa nekutsika nekutambanudza iyo simbi ndiro. Iyo mesh yepamusoro ine hunhu hwekugadzikana, ngura kuramba, yakanyanya kupisa tembiricha, uye yakanaka mweya mweya. Mhando: Chibvumirano ...
Kambani yedu ibhizinesi rinogadzira mukugadzira uye kutengeswa kwemasimbi mesh waya uye firita michina. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumishini, petrochemical, plastiki, simbi, mishonga, kurapwa kwemvura uye mamwe maindasitiri. Kambani yedu yakafambira mberi yekugadzira uye yekuyedza michina, yakaoma sainzi manejimendi uye mhando kutonga. Mushure memakore anopfuura makumi maviri ekuvandudza, rave bhizinesi remazuva ano kusanganisa R & D, dhizaini, kugadzira, kutengesa, uye sevhisi. Pamusoro pekugutsa vatengi vepamba, zvigadzirwa zvedu Zvakaendeswa kunze kuUnited States, Brazil, Germany, Poland, Australia, New Zealand, Taiwan nedzimwe nyika nematunhu.
ZVIITIKO & ZVOKUDZIDZA ZVINONYANYA
Yakawedzerwa simbi ndeyesimbi sheet rakatemwa ndokutambanudzwa kugadzira dhayamondi kana hexagonal maitiro. Vanhu vanogona kuishandisa nenzira dzakawanda Iwo maratidziro sezasi: Tambo ndeimwe yakatemwa matambo esimbi, kana mativi edhiimani kuvhura. SWD, kana Ipfupi Nzira yekugadzira, ndiyo nhambwe iri pakati p ...
Extruder skrini iri mumhando dzakasiyana dzetambo mesh yakatemwa kuita zvidimbu
Izvo zvinhu zvinonyanya kuve simbi yakajeka, simbi isina chinhu uye zvimwe zvinhu. Stainless simbi skrini mapakeji anodzivirira ngura kupfuura mamwe materail. Stainless Simbi Extruder Screens anoshandiswa zvakanyanya pane epurasitiki jira extruder,, granulator, uye isina machira machira, color masterbatch, nezvimwewo Mesh: ...
Tsananguro yechigadzirwa Nickel waya yepasi inoreva zvigadzirwa zvesimbi mesh zvigadzirwa zvakagadzirwa neepamusoro-yakachena nickel zvinhu (nickel waya, nickel ndiro, nickel foil, nezvimwewo) ine nickel yezvinhu 99.5% kana kupfuura. Zvinoenderana nemaitiro ekugadzira, zvigadzirwa zvinogoverwa mumhando dzinotevera: A. Nickel w ...
Epoxy caoted waya pajira riya
1. Chigadzirwa zita / zita remadunhurirwa: Epoxy yakavharwa waya pajira riya, epoxy yekumhara mesh, electrostatic yekupfeka mesh, hydraulic firita yekudzivirira mesh, hydraulic firita mesh, hydraulic firita simbi pajira riya, firita rutsigiro pajira riya, epoxy hwindo screen mesh. 2.Kutsanangurwa kwakadzama kwechigadzirwa: Industrial epoxy yakavharwa ...